Ku saabsan jacaylka: inta u dhaxaysa dareenka iyo caqliga (Tiirka 22) - Rabbi Michael Avraham
Ku saabsan Jacaylka: Inta u dhaxaysa dareenka iyo maskaxda (Tiirka 22)
16 faallooyin	/ 19 Ceelul 09 - 2016/XNUMX/XNUMX 26 / 06 / 2019
Qaybta Tawreed ee usbuucan (oo waxaan ka baryayaa) parsha "Oo Rabbiga Ilaahaaga jecel" ayaa ka muuqda akhrinta Shema, taas oo ka hadlaysa amarka ah in Rabbiga la jeclaado. Markii aan maqlay baaqii maanta, waxaan soo xusuustay qaar ka mid ah fikirradii hore ee aan ka haystay guud ahaan jacaylka, gaar ahaan jacaylka Eebbe, oo aan dhawr qodob ku sifeeyay.
Inta u dhaxaysa dareenka iyo maskaxda ee go'aamada
Markii aan wax ku baray yeshiva ee Yeruham, waxaa jiray arday i weydiyay doorashada lamaanaha, in la raaco shucuurta (qalbiga) ama maskaxda. Waxaan ugu jawaabay in maskaxda ka dib, laakiin maskaxdu ay tixgeliso waxa qalbigu dareemayo (xidhiidhka shucuureed, chemistry, lammaanaha) oo ka mid ah qodobbada go'aankeeda. Go’aannada dhinac walba ah waxay u baahan yihiin in maskaxda lagu sameeyo, qalbigana shaqadiisu waa in la soo geliyo agabka u baahan in la tixgeliyo balse aan la go’aansan. Waxaa jira laba sababood oo suurtagal ah tan: mid waa farsamo. Socodka wadnaha ka dib waxay u horseedi kartaa natiijooyin khaldan. Dareenku had iyo jeer maaha qodobka keliya ama ugu muhiimsan arrinta. Maskaxda ayaa ka dheelli tiran qalbiga. Midda labaad waa wax la taaban karo. Markaad xilka wareejiso, dhab ahaantii ma go'aansato. Go'aanka qeexitaankiisu waa ficil maskaxeed (ama halkii: ikhtiyaari), maaha mid shucuureed. Go'aanka waxaa lagu sameeyaa xukun miyir leh, halka dareenka laftiisa uu ka soo jeedo oo aan ka soo bixin xukunkayga. Dhab ahaantii, socodka wadnaha ka dib ma aha go'aan gabi ahaanba. Waa go'aan la'aan laakiin in duruuftu kuu soo jiido meel kasta oo ay noqoto.
Ilaa hadda malo-awaalku wuxuu yahay in jacaylku yahay arrin qalbiga ku jirta, doorashada lammaanaha maahan arrin jacayl oo keliya. Sida la sheegay, dareenku waa uun mid ka mid ah arrimaha. Laakiin waxaan u maleynayaa in taasi aysan ahayn sawirka oo dhan. Xataa jacaylka laftiisa maaha dareen kaliya, lagana yaabo in aanu xataa ahayn waxa ugu muhiimsan ee ku jira.
Ku saabsan jacaylka iyo damaca
Markuu Yacquub Raaxeel u shaqaynayay toddoba sannadood, Qorniinku wuxuu leeyahay, "Oo dhawr maalmood ayaa indhihiisa ku jiri doona jacayl uu iyada u qabo" (Bilowgii XNUMX:XNUMX). Su'aasha ayaa la og yahay in tilmaantani ay u muuqato mid ka soo horjeeda waayo-aragnimadeena caadiga ah. Sida caadiga ah qofku marka uu qof ama shay jecel yahay oo ay tahay inuu sugo, maalin kasta waxay ula egtahay mid daa'in ah. Halka ay aayadu ka sheegayso in toddobadii sannadood ee uu adeegay ay isaga ula ekaayeen dhawr maalmood. Waa arrin lid ku ah dareenkeena. Sida caadiga ah waxaa loo sharxay in tani ay tahay sababtoo ah Yacquub wuxuu jeclaa Rachel ee ma uusan jeclayn naftiisa. Qofka wax jecel ama qof jecel oo naftiisa la raba dhab ahaantii naftiisuu dhexda dhigaa. Waa dantiisa oo buuxin u baahan, markaa way adag tahay inuu sugo inta uu ka guulaysanayo. Isagu naftiisa ayuu jecel yahay ee ma jecla lammaanihiisa. Laakiin haddii ninku uu jecel yahay lammaanihiisa oo ficilladiisa loo sameeyo iyada oo aan isaga loo samayn, markaa xitaa sannadaha shaqada ayaa u muuqda qiimo yar.
Don Yehuda Abarbanel waxa uu ku sheegay buugiisa Sheekaysiga Jacaylka, iyo sidoo kale falsafada, siyaasiga iyo saxafiga Isbaanishka ah ee Jose Ortega i Gast, buugiisa Shanta Essays ee Jacaylka, kala saar jacaylka iyo damaca. Labaduba waxay sharxayaan in jacaylku yahay dareen centrifugal ah, taasoo la macno ah in fallaadhkeeda awooddu ay u jeeddo qofka dibadda. Halka damacu uu yahay dareen centrifugal ah, taas oo ah, fallaadha awoodda ayaa dibadda uga soo jeedda, gudaha. Jacaylka kan dhexda ku jira waa mid la jecel yahay, halka damaca midka dhexe uu yahay midka jecel (ama damaca, ama damaca). Waxa uu rabaa in uu qabsado ama ku guuleysto qof naftiisa jecel. Arrin arrintaas ku saabsan indha-indheeyadeenu waxay hore u yiraahdeen (halkaas, halkaas): Kalluumeysatada ma jecel yahay kalluunka? Haa Haddaba muxuu u cunayaa?!
Eray-bixintan waxa la odhan karaa Yacquub wuu jeclaa Rachel oo ma uu damcin Rachel. Damacu waa hanti, micneheedu waxa weeye in damacu rabo in uu geliyo wax kale oo uu damco, markaa ma sugi karo in ay mar hore dhacdo. Maalin kasta waxay isaga ula muuqataa daa’in. Laakiin jacaylku wuxuu rabaa inuu siiyo mid kale (gacaliyaha), markaa kuma dhibayso inuu shaqeeyo sanado haddii taasi ay tahay waxa lagama maarmaanka u ah inay dhacdo.
Waxaa laga yaabaa in cabbir kale lagu dari karo farqigan. Maahmaahyada khuraafaadka ah ee baraaruga jacaylku waa iskutallaabta Cupid ee ku dheggan qalbiga qofka wax jecel. Maahmaahdani waxa ay tilmaamaysaa jacaylka in uu yahay dareen ka dhex abuurma qalbiga qofka wax jecel dartiis. Tani maaha go'aankiisa ama xukunkiisa. Laakiin tilmaantani waxay aad ugu habboon tahay damaca halkii jacaylka. Jaceylka waxaa ku jira wax ka sii muhiimsan oo ka dareen yar. Xataa haddii ay u muuqato in ay nafteeda ka soo kacdo iyada oo aan sharci iyo qawaaniin la'aan, waxay noqon kartaa caqli-gal qarsoon, ama natiijada shaqada maskaxeed iyo ruuxeed ee ka horraysa xilliga baraaruga. Maskaxda aan dhisay ayaa ku baraarugtay qaabka aan u qaabeeyey. Sidaa darteed jacaylka, si ka duwan damaca, waxaa jira cabbir go'aan iyo rabitaan ee ma aha oo kaliya dareenka oo si dareen leh u soo baxa si ka madaxbannaan aniga.
Jacaylka Ilaahay: Dareenka iyo Maskaxda
Maimonides wuxuu kaga hadlayaa jacaylka Ilaah laba meelood buugiisa. Shuruucda aasaasiga ah ee Tawreedka waxa uu kaga hadlayaa Shuruucda jacaylka Ilaahay iyo dhammaan awaamiirtooda, sidoo kale waxa uu si kooban ugu celcelinayaa shuruucda towbada (sida mawduucyada kale ee ku soo noqnoqda sharciyada towbada). Tashuuca cutubkiisii ​​tobnaad bilowgiisii ​​ayuu kaga hadlay shuqulka Rabbiga magaceeda aawadiis, iyo waxyaalo kale oo uu qoray.
A. Ninna yuusan odhan waxaan samaynayaa awaamiirta Tawreed oo xikmaddeeda ku shaqaysta si aan u helo nimcooyinka ku qoran oo dhan ama si aan nolosha aakhiro u helo, ugana fadhiisto gefafka ay Tawreed ka digtay. in kan sidaas ku shaqaynayaa uu yahay mid cabsi badan oo aan ahayn fadligii Nabiyada iyo Suubbanaha xikmadaha, Eebbana sidaas kuma shaqeeyo ee dadka dhulka iyo dumarka iyo kuwa yarba maaha. kuwa ku bara in ay cabsi ku shaqeeyaan ilaa ay bataan oo ay ka shaqeeyaan jacayl.
B. Shaqaale jacaylku wuxuu la macaamilaa Tawreed iyo Matzah wuxuuna ku socdaa dariiqyada xigmadda waxna uma aha adduunka oo aan ka cabsanin xumaanta oo aan wanaagga dhaxlin laakiin wuxuu sameeyaa runta sababtoo ah waa run iyo dhamaadka wanaagga. oo ka mid ah, iyo wanaaggani waa akhlaaq aad u weyn oo la jeclaaday sida uu u shaqeeyay laakiin aan ahayn jacayl oo waa wanaaggii uu Ruuxa Quduuska ah ugu duceeyey Muuse in la yidhi oo aad jeclaatay Rabbiga Ilaahaaga ah. Ninkuna intuu Rabbiga jecel yahay jacaylka saxda ah wuxuu isla markiiba ka dhigi doonaa dhammaan matzahyada jacaylka.
Maimonides ereyadiisa halkan wuxuu tilmaamayaa inta u dhaxaysa shaqada Ilaah iyo magaceeda (ie ma aha dan dibadda ah) jacaylka isaga loo qabo. Waxaa intaa dheer, Halacha XNUMX wuxuu ku qeexay jacaylka Ilaah inuu yahay runta samaynta sababtoo ah waa run ee maaha sabab kale. Tani waa qeexitaan aad u falsafad iyo qabow, iyo xitaa fogaansho. Ma jiro cabbir dareen ah halkan. Ilaah jacaylkiisu waa in runta la sameeyo, waayo isagaa runta ah, waana taas. Taasi waa sababta Maimonides u qorto in jacaylkani yahay wanaagga kuwa caqliga leh (oo aan ahayn dareenka). Tani waa waxa mararka qaarkood loogu yeero "jacaylka caqliga ee Ilaah."
Oo halkan, isla markiiba xarakaadkan soo socda ayuu qoray caksi oo dhammaystiran:
saddexaad. Siduu Jaceylka saxda ah u yahay in uu Gd u jeclaado Jaceyl aad u daran oo aad u daran ilaa ay naftu ku xirato Jaceylka Alle oo ay mar walba ku qaldato sida qofka Jaceylka jiran ee maskaxdiisu aysan xor ka aheyn jaceylka. naagtaas iyo isagu had iyo jeer waa ku qaldamaan maalinta Sabtida, taasuna waxay noqon doontaa jacaylka Ilaah ee ku jira quluubta kuwa isaga jecel oo had iyo jeer ku qalda, sida lagu amray qalbigaaga oo dhan iyo naftaada oo dhan, waana in Sulaymaan uu yidhi maahmaah in aan caashaq ka bukoon yahay, hees kasta oo maahmaahduna waa ujeeddo.
Halkan jacaylku waa mid kulul oo shucuur leh sida jacaylka ninku u qabo haweeneyda. Sida lagu tilmaamay sheeko-xariirada ugu wanaagsan, gaar ahaana heesta heesaha. Qofka wax jeceli wuu u bukay jacaylka oo mar walba wuu ku qaldamaa. Marna wuu ka mashquulin kari waayay.
Sidee baa waxaas oo dhami ula xidhiidhaan sawirkii maskaxeed ee qabow ee lagu tilmaamay xalaqadii hore? Maimonides miyuu wareeray, mise wuu ilaaway wixii uu halkaas ku qoray? Waxaan ogaan doonaa in tani aysan ahayn iska hor imaad aan ka helnay laba meelood oo kala duwan qoraalladiisa, ama Maimonides iyo waxa lagu sheegay Talmud. Waxaa jira laba sharci oo isku dhow oo isku xigta oo halkan ku hadla luqado kala duwan oo midba midka kale ka mid ah.
Waxaan qabaa in qofku halkan ka digtoonaado faa'iidada faa'iido-darrada ee xallinta dhammaystirka ah. Marka aad la timaado masaal si aad wax u sawirto, waxa uu masaalku ka kooban yahay tafaasiil badan oo aanay dhammaantood khusayn farriinta iyo masaalka. Waa in la helaa barta ugu muhiimsan ee masaalku u yimid si uu wax u baro, oo aan si ciriiri ah loo qaadan tafaasiisha inteeda kale ee ku jirta. Waxaan filayaa in masaalka Halacha XNUMX uu ku yimid in kastoo jacaylka Eebbe yahay mid caqli-gal ah oo aan caadifad ahayn, haddana waa in mar walba la khaldamaa oo aan qalbiga laga leexin. Masaalkani wuxuu u imanayaa inuu baro waaritaanka jacaylka sida jacaylka ninku u qabo naag, laakiin maaha daruuri dabeecadda shucuurta ee jacaylka jacaylka.
Tusaalaha towbada, kafaaraggud iyo cafiska
Waxaan ku soo noqon doonaa wakhti yar oo farxad leh oo Yeruusaalem. Intii aan halkaa ku sugnaa, waxa ila soo xidhiidhay dugsiga sare ee deegaanka ee Sde Boker, waxana ay iga codsadeen in aan la hadlo ardayda iyo shaqaalaha inta lagu jiro Tobanka Maalmood ee Towbad keenka ee ku saabsan kafaara-gudka, cafiska iyo cafiska, laakiin maaha mid diineed. Waxaan hadalkayga ku bilaabay su’aal aan u jeediyay. Bal qiyaas Ruubeen wax ku dhuftay Shiimoon oo uu taas ka calool xumaaday, markaasuu goostay inuu u tago oo raalli ka noqdo. Qalbigiisa ayuu ka cudur daartay, wuxuuna ka baryaya inuu cafiyo. Levy, dhanka kale, wuxuu sidoo kale ku dhuftay Shimon (Shimon malaha wuxuu ahaa wiilka madaxa ee fasalka), wax qoomamo ah kama qabo taas. Qalbigiisu ma cadaabo, wax dareen ah oo ku xeeran arrinka kuma jiro. Runtii taas dan uma laha. Weli, wuxuu gartay inuu sameeyay fal xun oo uu dhaawacay Shimon, sidaas darteed isna wuxuu go'aansaday inuu aado oo weydiisto cafis. Malaa'ig Jibriil ayaa u timid Simoon nasiib-darro ah oo u muujiyay qoto dheer ee qalbiyada Ruubeen iyo Laawi, ama laga yaabee in Simoon qudhiisu uu qadariyo in tani ay tahay waxa ka dhacaya qalbiyada Ruubeen iyo Laawi gudaha. Maxaa la gudboon? Ma aqbashay raaligelinta Ruuben? Oo ka waran codsiga Levy? Codsiyada kee baa mudan in la cafiyo?
La yaab ma leh, falcelinta daawadayaashu waxay ahaayeen kuwo iswaafaqsan. Codsiga Reuven waa mid dhab ah oo mudan in la cafiyo, si kastaba Levy waa munaafaqnimo mana jirto sabab loo cafiyo. Dhanka kale, waxaan ku dooday in sida ay aniga ila tahay xaaladdu waa caksi. Raali gelinta Ruuben waxa ay ugu talagashay in lagu quudiyo damiirka murugada leh. Dhab ahaantii wuxuu u shaqeeyaa nafsaddiisa (centrifugally), isaga oo dantiisa ka eegaya (si uu u dejiyo calool-xanuun iyo damiirka murugada). Levy, dhanka kale, waxa uu sameeyaa fal saafi ah oo cajiib ah. In kasta oo aanu caloosha iyo wadne xanuun ka qabin, haddana waxa uu garwaaqsaday in uu khalad sameeyay, waajibna ka saaran yahay in uu u fududeeyo Simoon ee dhaawacmay, sidaa awgeed waxa uu samaynayaa wixii laga rabay oo uu cafis waydiistay. Tani waa fal centrifugal ah, sida loo sameeyo dhibbanaha ee ma aha naftiisa.
In kasta oo qalbigiisa Levy aanu waxba dareemin, laakiin maxay muhiim u tahay? Waxa loo dhisay si ka duwan sidii Ruubeen. Amygdala-kiisa (kaas oo mas'uul ka ah naxariista) waa la dhaawacay sidaas darteed xaruntiisa shucuur uma shaqeyneyso si caadi ah. Haddaba waa maxay?! Iyo in haykalka ladhashay ee aadamuhu uu ka qayb qaato ixtiraamka aynu isaga u hayno? Taas beddelkeeda, waa sida saxda ah dhaawacan oo u oggolaanaya inuu u dhaqmo si nadiif ah, qumman oo dhammaystiran, kaliya Shimon dartiis, sidaas darteed wuxuu mudan yahay cafis .
Xagga kale waxa la odhan karaa Reuben waxa uu dhab ahaantii u dhaqmayaa dareen ka baxsan, halka Levy uu falkan ku samaynayo xukunkiisa iyo xukunkiisa. Mahadnaq akhlaaqdu waxay ku timaaddaa qofka go'aannadiisa ee maaha dareenka iyo dareenka ka dhasha ama aan ka dhalan.
Dareenka sabab ama natiijo ahaan
Uma jeedo inaan idhaahdo eed ama qoomamo ayaa daruuri ka dhigaysa anshaxa falka ama qofka. Haddii Levy uu u oggolaado Shimon sababo sax ah (centrifugal), laakiin isla mar ahaantaana wuxuu leeyahay dareen dembi ah ka dib dhaawaca uu u geystay isaga, falku waa mid dhamaystiran oo gebi ahaanba saafi ah. Ilaa iyo inta sababta uu u sameeyo maaha dareenka, taas oo ah, daboolaya dabka dhexdiisa, laakiin u keenaya bogsashada Simoon dhibaataysan. Jiritaanka dareenka, haddii aysan ahayn sababta ficilka dib-u-heshiisiinta, waa inaysan faragelin qiimeynta anshaxa iyo aqbalaadda codsiga cafiska. Qofka caadiga ah wuxuu leeyahay dareen noocaas ah (amygdala ayaa mas'uul ka ah), haddii uu rabo iyo haddii kale. Sidaa darteed way caddahay in aanay diidayn helitaanka codsiga. Laakiin si sax ah sababtoo ah dareenkani sidoo kale maaha mid muhiim ah halkan, sababtoo ah waxay soo baxdaa iyada oo aan raacin go'aankayga laakiin laftiisa (waa nooc ka mid ah dareenka). Dareenku ma tilmaamayo daacadnimada akhlaaqda ama khasaare. Akhlaaqdeena waxaa lagu go'aamiyaa go'aamada aan qaadanno ee maaha mid ku yimaada shucuurta ama dareenka innaga oo ka baxsan xakamaynta. Cabbirka shucuureed ma farageliyo laakiin sabab la mid ah sidoo kale muhiim uma aha qadarinta akhlaaqda. Jiritaanka shucuurtu waxay u malaynaysaa inay dhexdhexaad ka tahay diyaaradda xukunka anshaxa.
Haddii dareenka la abuuray iyada oo ay sabab u tahay fahamka miyir-qabka ah ee dhibaatada akhlaaqda ee ficilka, markaa waxay calaamad u tahay anshaxa Ruuben. Laakiin mar labaad, Levy, oo ay ku dhacday amygdala oo sidaas darteed ma kobcin dareenkaas, wuxuu sameeyay go'aanka akhlaaqda saxda ah, sidaas darteed uma qalmo ammaan iyo mahadnaq ka yar Reuben. Farqiga u dhexeeya isaga iyo Ruubeen waa uun qaab-dhismeedka maskaxeed ee maaha in xukunkooda akhlaaqeed iyo go'aankooda. Sida la sheegay, qaab-dhismeedka maskaxdu waa xaqiiqo dhexdhexaad ah oo aan wax shaqo ah ku lahayn qadarinta akhlaaqda ee qofka.
Sidoo kale, milkiilaha Tal Agli wuxuu horudhaciisa ku qoray xarafka C:
Inta aan ku idhi, xasuuso hadalka aan ka maqlay dadka qaar oo ku saabsan barashada Tawreedkeena kariimka ah, oo ay yiraahdeen qofka wax bartay ee dib u cusboonaysiinta wax cusub oo ku farxa oo ku raaxaysta waxbarashadiisa, ma barto Tawreed. , Laakiin kii barta oo raaxaysta waxbarashadiisa, wuxuu soo dhexgalaa waxbarashadiisa iyo sidoo kale raaxada lafteeda.
Runtiina waa khalad caan ah. Taas caksigeeda, maxaa yeelay tani waa nuxurka amarka ah in la barto Tawreed, si aad u lixaad u noqoto oo aad u faraxsan tahay oo aad ku raaxaysato waxbarashadiisa, kadibna erayada Tawreed waxay ku dhex liqaan dhiiggiisa. Oo maadaama uu ku riyaaqay ereyada Tawreed, wuxuu noqday mid ku dheggan Tawreed [oo fiiri tafsiirkii Rashi Sanhedrin Nuux. D.H. iyo xabag].
Kuwa "khaladka ah" waxay u maleynayaan in qof kasta oo ku faraxsan oo ku raaxaysta daraasadda, tani waxay wax u dhimaysaa qiimaha diineed ee waxbarashadiisa, sababtoo ah waxaa loo sameeyey si raaxaysi ah oo aan loo samaynin jannada (= iyada lafteeda). Laakiin tani waa qalad. Farxad iyo raynrayn kama dhimaan qiimaha diineed ee falku leeyahay.
Laakiin tani waa hal dhinac oo kaliya ee lacagta. Wuxuu markaas ku darayaa dhankiisa kale:
Iyo Modina, in qofka bartaa uusan ahayn mid loogu talagalay mitzvah-ka waxbarashada, kaliya sababtoo ah wuxuu ku faraxsan yahay waxbarashadiisa, sababtoo ah waxa loogu yeeraa barashada ma aha aawadiis, sida uu u cuno matzah ma aha mid ka mid ah mitzvah kaliya damac cunista raaxada; Waxayna yiraahdeen:- Waligiis kuma gali doono wax aan magaceeda ahayn, oo maskaxdeeda ka baxay. Laakiinse isagu miskiin buu wax u bartaa, oo waxbarashadiisa aad buu u jecel yahay, waayo, waa cilmi magiciisa daraaddiis, oo kulligoodna waa quduus, maxaa yeelay, raaxaysigu waa miskiin.
Yacni, raynrayn iyo raynrayn kama dhimaan qiimihii falku marba haddii ay ku lifaaqan yihiin waxyeello kale. Laakiin haddii qofku wax u barto raaxaysi iyo raynrayn, tusaale ahaan kuwani waa waxyaalaha ku dhiirigeliya waxbarashadiisa, hubaal maaha in wax loo barto. Halkan waxay ku saxnaayeen "khalad." Eray-bixinteenna waxa la yidhi khaladkoodu maaha in ay ku fikiraan in aan daraasadda loo samayn hab centrifugal ah. Taas lidkeeda, gabi ahaanba waa sax. Qaladkoodu waa in jiritaanka raaxaysi iyo raynrayntu ay muujinayso fikirkooda in tani ay tahay fal centrifugal ah. Runtii lagama maarmaan maaha. Mararka qaarkood raynrayn iyo raynrayntu waa shucuur ku timaada oo keliya natiijada waxbarashada oo aan sabab u noqon.
Ku noqo jacaylka Ilaah
Guntii iyo gunaanadkii waxii ilaa hadda ka soo baxay ayaa ah in sawirka aan markii hore ku tilmaamay mid aan dhammaystirnayn, xaaladduna ay aad u cakiran tahay. Waxaan kala saaray jacaylka (centrifugal) iyo damaca (centrifugal). Dabadeed waxaan kala saaray jacaylka shucuureed iyo garaadka, waxaanan aragnay in Maimonides uu u baahan yahay caqli-wax-garadnimo halkii uu ka ahaan lahaa jacaylka shucuureed ee Ilaah. Sharaxaadda cutubyada u dambeeya ayaa sharxi kara sababta.
Marka jacaylku yahay mid shucuur ah, badanaa wuxuu leeyahay cabbir dhexe. Marka aan dareemo dareen xoogan oo jacayl shucuur ah qof gaar ah, markaas ficilada aan qaado si aan u guuleysto waxay leeyihiin cabbir aniga i soo jiita. Waxaan taageeraa shucuurtayda waxaanan rabaa in aan buuxiyo dareenka shucuureed ee aan dareemo ilaa iyo inta aanan helin. Xataa haddii uu jacayl yahay oo aanu ahayn damac, ilaa inta uu leeyahay cabbir shucuureed waxa ay ku lug leedahay laba jiho oo ficil ah. Anigu ma shaqeeyo oo keliya gacaliyaha ama gacaliyaha, laakiin sidoo kale naftayda. Taas bedelkeeda, jacaylka maskaxeed ee saafiga ah oo aan lahayn cabbir shucuureed, waa qeexid fal centrifugal saafi ah. Ma haysto wax iga maqan oo kama hortagayo dareenka gudahayga ee ay tahay in aan taageero, laakiin kaliya u shaqeeyo gacaliyaha dartiis. Sidaa darteed jacaylka saafiga ah waa jacayl maskaxeed, platonic. Haddii dareen uu ku abuurmo natiijo, waxa laga yaabaa in aanay waxba yeelin, laakiin waa inta ay tahay natiijo oo aanay qayb ka ahayn sababta iyo dhiirigelinta ficilladayda.
Tani waxay sharxi kartaa su'aasha ah sida qofku u amri karo jacaylka Ilaah, iyo jacaylka guud ahaan (waxaa sidoo kale jira amar ah in la jeclaado farxadda iyo jacaylka shisheeyaha). Haddii jacaylku yahay caadifad markaas waxa uu soo baxaa si dareen leh oo aan aniga igu xidhnayn. Haddaba waa maxay macnaha amarka jacaylka? Laakiin haddii jacaylku yahay natiijada xukunka maskaxda oo aanu ahayn caadifad, markaas waxaa jirta meel lagu wada shaqeeyo.
Xaaladdan oo kale waa hadal kaliya oo lagu muujin karo in dhammaan amarrada ka hadlaya dareenka sida jacaylka iyo nacaybka aysan u jeedin shucuur ee waxay u jeedaan cabbirkeenna garaadka. Tusaale ahaan, R. Yitzchak Hutner waxa uu keenay su'aal la waydiiyay isaga sida Maimonides u tiriyay amarka ah in Hagar la jeclaado kooramkeena, maadaama ay ku jirto amarka in farxadda la jeclaado. Hagar waa Yuhuudi sidaas darteed waa in sidaas la jeclaado waayo waa Yahuud, haddaba maxay soo kordhinaysaa amarka Hagar la jeclaado? Sidaa darteed, haddii aan qof qalaad u jeclaado nin qalaad, maxaa yeelay, waa Yuhuudi sidaan u jeclahay Yahuudi kasta, ma aan xajin amarkii ahaa inaan mid shisheeye jeclaado. Sidaa darteed, waxay sharraxaysaa RIA, halkan ma jiro nuqul ka mid ah, oo mitzvah kastaa wuxuu leeyahay nuxur u gaar ah iyo qaabka jiritaankiisa.
Taas macnaheedu waa in amarka Hagar la jeclaado uu yahay mid caqli-gal ah oo aan caadifad ahayn. Waxay ku lug leedahay go'aankayga inaan isaga u jeclaado sababtaas iyo sidaas oo kale. Kani ma aha jacayl ay tahay in ay igu beeri karto nafteeda. Ma jiraan wax kooxda ah oo arrintan ku saabsan, sida mitzvos rafcaan u tahay go'aannadayada oo aan ahayn shucuurteena.
Khudbadda Chazal ee jacaylka farxadda waxay tix-gelinaysaa hawlo badan oo ay tahay inaan samayno. Oo sidatan ayuu Maimonides u dhigay bilowga aayadda afraad ee Rabbiga, laakiin:
Mitzvah wuxuu erayadoodii ka dhigay inuu kuwa buka soo booqdo, oo kuwa baroorta u qalbi qaboojiyo, oo kuwii dhintay soo bixiyo, oo aroosadda la keeno, oo martidii soo raacaan, oo uu wax ka qabto dhammaan baahiyihii aaska, oo uu garabka ku qaado, iyo lilac hortiisa. Baroorta oo qodo oo xabaal, oo ku farxa aroosadda iyo aroosadda, Shiiur, in kasta oo dhammaan madxadahaas ay hadalkooda ka yimaaddeen, haddana guud ahaan, oo deriskaaga u jeclaada sida naftaada oo kale, wax kasta oo aad rabto in ay kuwa kale kugu sameeyaan, waad samaysay. Iyaga walaalkiin oo jooga Tawreed iyo Matxaf.
Mar kale waxay u muuqataa in mitzvah jacaylka jacaylka uusan ku saabsanayn shucuurta laakiin ku saabsan ficillada.
Waxa kale oo taas ku cad aayadda parshayada ku jirta ee odhanaysa:
Ka dib oo dhan, ka dibna, iyo si kastaba ha ahaatee,
Jacaylku wuxuu u rogaa ficil. Oo sidaas daraaddeed waxay la socotaa aayadaha Parashat Akev (loo yaqaan toddobaadka soo socda. Sharciga Kunoqoshadiisa XNUMX: XNUMX):
Oo waa inaad jeclaataa Ilaaha Ilaahaaga, oo waa inaad had iyo goor dhawrtaan waxa loo dhawri doono, iyo qaynuunnadiisa, iyo xukummadiisa, iyo xukummadiisa.
Intaa waxaa dheer, Sages waxay sidoo kale dalbanayaan aayadaha ku jira parshayada ku saabsan saameynta la taaban karo (Brachot SA AB):
Iyo gobol kasta - Tanya, R. Eliezer wuxuu leeyahay, haddii naftaada oo dhan lagu sheego sababta dhulkaaga oo dhan loogu sheegay, iyo haddii dalkaaga oo dhan laga sheego sababta naftaada oo dhan loogu sheegay, haddii aadan haysanin. Qof jidhkiisu jecel yahay, Maad oo dhan baa sidaas lagu yidhi.
Jacaylku ma soo jiito shay ama cinwaanadiisa?
Labadaydii gaadhi iyo buuga buufin ee iridda labaad ayaan ku kala saaray shayga iyo sifooyinkiisa ama magacyadiisa. Miiska i horyaala waxa uu leeyahay astaamo badan: waxa uu ka samaysan yahay alwaax, waxa uu leeyahay afar lugood, dheer, raaxo, bunni, wareeg ah iyo in ka badan. Laakiin waa maxay miiska laftiisa? Qaar baa odhan lahaa miisku wax kale ma aha ee waa ururintan sifooyinka (sidaas darteed malaha faylasuufka Leibniz ayaa u malaynaya). Buugayga halkaas ku jira waxaan ku dooday in aanay taasi run ahayn. Shaxda waa wax kale oo aan ka ahayn ururinta sifooyinka. Waxaa aad u saxsan in la yiraahdo wuxuu leeyahay tayada. Sifooyinkaasi waa sifooyinkiisa 
Haddii shay uusan ahayn wax aan ahayn ururinta hantida, markaa ma jirin wax caqabad ah in la abuuro shay laga soo bilaabo ururinta hantida. Tusaale ahaan, khudradda dhagaxa jaadka ah ee farta qof gaar ah oo leh barxadda miiska ee igu xigta iyo hawada sare ee daruuraha cumulonimbus ee naga sarreeya waxay noqon doontaa shay sharci ah. maxaa diidaya? Sababtoo ah ma jiro shay leh dhammaan sifooyinkaas. Waxay ka tirsan yihiin walxo kala duwan. Laakiin haddii shay uusan ahayn wax aan ahayn ururinta hantida, markaa suurtagal maaha in sidaas la yiraahdo. Gabagabadii ayaa ah in shaygu aanu ahayn hanti ururin. Waxaa jira sifooyin urursan oo lagu garto.
Ku dhawaad ​​wax kasta oo laga sheego shay, sida miiska, waxay ka koobnaan doonaan bayaan ku saabsan hantidiisa. Marka aynu nidhaahno waa bunni ama alwaax ama dheer ama raaxo, kuwaas oo dhan waa sifooyinkiisa. Sidoo kale suurtagal ma tahay in hadallada ay wax ka qabtaan miiska laftiisa (lafihiisa)? Waxaan filayaa inay jiraan odhaahyo caynkaas ah. Tusaale ahaan, odhaahda ah in miiska uu jiro. Jiritaanka ma aha sifo miiska ka mid ah ee waa dood ku saabsan miiska laftiisa. Runtii hadalkayga xagga sare ka soo baxay ee ah in uu jiro wax la yidhaahdo miis ka baxsan sifada loo dejiyay waa odhaahda miiska ayaa jirta, waxaana cad in uu isna ka hadlayo ee aanu ku ekayn sifooyinkiisa oo keliya. Waxaan filayaa in xataa hadalka sheegaya in miisku yahay hal shay ee aanu laba ahayn uu yahay hadal isaga laftiisa ku jira ee aanu ahayn tilmaan ama sifo ka mid ah.
Markii aan kala soocay sannado ka hor mid ka mid ah ardaydayda ayaa ii sheegtay in iyada ra'yigeeda jacaylka qof uu sidoo kale u jeesto lafaha qofka wax jecel oo aan u leexin sifooyinkiisa. Dabeecaduhu waa dariiqa lagula kulmo isaga, laakiin markaas jacaylku wuxuu u noqdaa qofka sifooyinka leh ee uma jeedsado sifooyinkii, sidaas darteed waa laga yaabaa inuu sii noolaado xitaa haddii sifooyinku isbeddelaan. Waxaa laga yaabaa in tani ay tahay waxa xikmado ku yiri Pirkei Avot: Iyo dhammaan jacaylka aan waxba ku xidhnayn - waxba burin oo jacaylka buriya."
Sharaxaad kale oo ku saabsan mamnuucida shaqada shisheeye
Sawirkan ayaa laga yaabaa inuu iftiimiyo dheeraad ah oo ku saabsan mamnuucidda shaqada shisheeye. In our parsha (oo waan ka tuugsan doonaa) Tawreed dheerayn mamnuucidda shaqada shisheeye. Haftarah (Ishacyaah cutubka M) wuxuu kaloo ku saabsan yahay dhankeeda ka soo horjeeda, oofin la'aanta Ilaah:
Nhmo Nhmo Ami Iamr Gd: Dbro on hearted Iroslm iyo Krao Alih Ci forth Tzbah Ci Nrtzh Aonh Ci Lkhh Mid Ikok Cflim Bcl Htatih: S. Cole akhriste cidlada Fno Drc Ikok Isro Barbh Mslh Lalhino: Cl Giamount Insa iyo Chl Iss iyo Hih Hakb Lmisor iyo Hrcsim Lbkah: Virtzer Majeker: Nadshading si ay ugu dilaan qolka jiifka Irah Bzrao Ikbtz Tlaim iyo Bhiko Isa Alot Inhl: S. Yaa Mdd Bsalo biyaha iyo Smim Bzrt Tcn iyo Cl Bsls Afr dhulka iyo Skl Bfls Hrim iyo Gbaot Bmaznim: Yaa Tcn At dabaysha Ikok iyo Ais Atzto Iodiano: Yaa Noatz iyo Ibinho iyo Ilmdho Barh Msft iyo Ilmdho xikmad iyo Drc Tbonot Iodiano: ay Goim Cmr Mdli iyo Cshk Maznim Nhsbo ay Aiim Cdk Itol: iyo Lbnon ma jiro Di Bar iyo Hito ma jiro Di Aolh: S Cl Hgoim Cain Ngdo Mafs iyo Tho Nhsbo isaga: iyo Al Who Tdmion god iyo Mh Dmot Tarco isaga: Hfsl Nsc farsamayaqaan iyo Tzrf Bzhb Irkano iyo Rtkot dahabsameeyaha qalinka: Hmscn Waa waqtigii ugu wacnaa ee la aado aduunka Th Cdk samada iyo Imthm Cahl Lsbt: Hnotn Roznim Lain Sfti land Ctho Ash: caro Bl Ntao caro Bl Zrao caro Bl Srs Bartz Gzam Isla sidaas oo kale Nsf Bhm iyo Ibso iyo Sarh Cks Tsam: S. Al Who Tdmioni iyo Asoh Iamr quduuska ah: Saope Ainicm iyo Rao Who Bra Kuwanu waa Hmotsia Tiro ciidankooda oo dhan magaca Rabbiga ayuu ugu yeedhi doonaa badidood, oo ninna kama maqna xooggiisa.
Cutubkani waxa uu ka hadlayaa xaqiiqada ah in Gd aanu lahayn muuqaal jidheed. Suuragal maaha in isaga loo tafatiro oo la barbar dhigo wax kale oo nala yaqaan. Haddaba sidee weli ula xiriiri kartaa isaga? Sideed ku gaartaa ama u garataa inay jirto? Aayadaha halkan ka jawaabaya: caqli ahaan kaliya. Waxaan aragnaa ficilladiisa oo iyaga waxaan ku soo gabagabeyneynaa inuu jiro iyo inuu awood leeyahay. Waxa uu abuuraa hay’ado dalka ka mid ah (Adduunyada ayuu abuuray) wuxuuna ku fadhiistaa wareegga dhulka (wuxuu maamulaa). Bal eega yaa abuuray kuwa ku bixiya tirada ciidankooda oo dhan magaca Yikra.
Marka la eego qaybta hore waxaa la odhan karaa Gd ma laha qaab, taas oo ah, ma laha sifooyin aan u aragno annaga. Annagu ma aragno oo ma aragno wax khibrad dareen ah oo la xidhiidha. Waxaan ka soo saari karnaa gabagabada ficilkeeda (ereybixinta falsafada dhex galka ah, waxay leedahay magacyo waxqabad ee maaha magacyo shay).
Jacaylka shucuurtu waxa uu u samaysan karaa shay si toos ah nooga gada, oo aanu aragno ama aragno. Ka dib waayo-aragnimada iyo dareenka tooska ah ee dareenka, jacaylka soo baxaya wuxuu u rogi karaa lafaha, laakiin tani waxay u baahan tahay dhexdhexaadinta cinwaannada iyo sifooyinka gacaliyaha. Iyaga ayaan kula kulannaa isaga. Haddaba way adagtahay in lagu doodo in uu jiro jacayl shucuur ah oo loo qabo hay’ad aynu ku gaadhno oo kaliya dood iyo fikrado caqli-gal ah, mana hayno qaab aan xidhiidh toos ah ula samayno. Waxaan u maleynayaa in dariiqa jacaylka caqli-galku uu halkan noogu furan yahay inta badan.
Hadday sidaas tahay, la yaab ma laha in parsha iyo haftarah ay la macaamilaan wax-soo-saarka Ilaah, haddii parsha uu keeno amarka lagu jecel yahay isaga. Marka la dhexgelinayo wax-soo-saarka Eebbe, gabagabada cad ayaa ah in jacaylka isaga loo qabo uu noqon karo oo keliya diyaaradda caqliga ee maaha on diyaaradda dareenka. Sida la sheegay, tani maahan wax khasaare ah maadaama sida aan aragnay ay tahay sida saxda ah jacaylka ugu nadiifsan uguna dhammaystiran ee dhammaan. Waa suurtogal in jacaylkani sidoo kale ku abuuri doono xoogaa dareen jacayl ah isaga, laakiin tani waa ugu badnaan lifaaq. Qayb aan macno lahayn oo ka mid ah jacaylka caqliga ee Ilaah. Dareenka noocan oo kale ah ma noqon karo kicinta asaasiga ah mar haddii aysan jirin wax ay qabtaan. Sida aan soo sheegay, dareenka jacaylka waxaa laga arkaa sawirka gacaliyaha, oo aan ka jirin Ilaah.
Waxaa laga yaabaa in cabbir kale laga arki karo halkan mamnuucista shaqada shisheeye. Haddii qofku u sameeyo jaantuska Ilaah, wuxuu isku dayaa inuu u rogo shay la dareemo kaas oo la samayn karo xiriir garasho toos ah, ka dibna jacaylka isaga ayaa noqon kara mid shucuur ah, mid ka mid ah dabeecadda centripetal kaas oo dhigaya qofka jecel halkii uu jecel yahay inuu joogo xarunta. Sidaa darteed Gd waxa uu ka dalbanayaa haftarkeena in aan gudaha u galno in aanay jirin hab lagu dayan karo (si looga dhigo dabeecad kasta), dariiqa lagu gaadhayana waa falsafad-caqli-galnimo, iyada oo la adeegsanayo fikrado. Sidaa darteed, jacaylka isaga, taas oo arrintu la macaamilayso, waxay sidoo kale yeelan doontaa dabeecad noocaas ah.
Waxaan filayaa inay jiraan waxyaabo yar oo shaqo shisheeye ah oo ku jira fikradaha diimeed ee qaar badan oo naga mid ah. Dadku waxay u maleynayaan in shaqada diineed qabow ay tahay khasaare, laakiin halkan waxaan isku dayay inaan muujiyo in ay leedahay cabbir dhammaystiran oo saafi ah. Jacaylka shucuurtu wuxuu inta badan ku dheggan yahay sawirka Ilaah, sidaas darteed waxaa laga yaabaa inay la ildaran tahay qalabkeeda cibaadada shisheeye. Waxaan isku dayay in aan halkan ku doodo aniga oo ka faa'iidaysanaya aragtida ah in jacaylka Ilaah loo malaynayo in uu ahaado mid platonic ah, caqli-gal ah iyo dareen ahaan ka fog.
 Waa run in haddii Levy's amygdala uu dhaawacmo, waxay noqon doontaa mid aad u adag, oo laga yaabo inay macquul tahay, inuu fahmo waxa uu sameeyay. Isagu ma uu fahmin waxa uu yahay dhaawaca niyadeed iyo sababta ay u xanuujiso Simon. Sidaa darteed dhaawaca amygdala waxa laga yaabaa inaanay u oggolaan inuu fahmo macnaha falkiisa, mana u malaynayo inuu raaligelin ka bixiyo. Laakiin waxaa muhiim ah in la fahmo in tani ay tahay shaqo ka duwan amygdala, taas oo aan muhiim u ahayn kiiskeena. Murankaygu waa in haddii aragti ahaan uu fahmo in uu dhibay Simon xitaa haddii aysan isaga dhibin, codsiga cafiska waa mid dhamaystiran oo nadiif ah. Dareenkiisu run ahaantii muhiim maaha. Waa run in farsamo ahaan la'aanteed dareenkaas oo kale laga yaabo in uusan sidaas samayn sababtoo ah ma uusan fahmin khatarta falka iyo macnaha uu leeyahay. Laakiin tani waa arrin farsamo oo keliya. Waxaa laga yaabaa inay la xiriirto furteyda in maskaxda ay go'aan ka gaarto, oo ay u qaadato dareenka mid ka mid ah arrimaha la tixgelinayo.
Waxay i xasuusinaysaa muxaadaro aan mar TED ka maqlay dhakhtarka neerfaha kaas oo maskaxda dhaawacday oo aan awoodin in uu dareemo dareenka. Waxay baratay inay ku daydaan falalkan shucuur ahaan farsamo ahaan. Sida John Nash (oo loo yaqaan buuga Sylvia Nasser, Wonders of Reason, iyo filimkii raacay), kaas oo la kulmay jawi bini'aadam ah oo khayaali ah oo bartay inuu iska indhatiro hab farsamo oo dhammaystiran. Waxa uu ku qancay in ay jiraan dad isaga ku xeeran, laakiin waxa uu ogaaday in kuwani ay yihiin khiyaali waana in uu iska indhatiraa iyaga inkastoo waaya-aragnimadu weli ku dhex jirto si buuxda. Ujeedada doodeena, waxaan u malayn doonaa Levy inuu yahay amygdala oo aan lahayn awood dareen shucuureed, kaas oo bartay inuu fahmo maskaxiyan iyo qabow (dareen la'aan) in ficilada noocaas ah ama kuwa kale ay waxyeeleeyaan dadka, waana in cafis la raadiyaa si loo qanciyo. Sidoo kale ka soo qaad in codsiga cafiska uu ku adag yahay sida qofka uu dareemayo, haddii kale waxaa lagu doodi karaa in aan falkaas la mahadin haddii uusan wax dhimir ah ka qaadin qofkii sameeya.
 Si faahfaahsan uga fiirso buugga kow iyo tobnaad ee Taxanaha macquulka ah ee Talmudic, Dabeecadda Plato ee Talmud, Michael Avraham, Israel Belfer, Dov Gabay iyo Uri Shield, London 2014, qaybta labaad.
 Maimonides asalkeeda waxay sheegaysaa in labanlaab mitzvot aan dib u cusboonaysiin wax ka baxsan mitzvah macaamiisha kale waa inaan la tirin.
 Oo la mid ma aha qaynuunka in la jeclaado qaangaadhka. Halkan ka arag hadalkayaga.
 In kasta oo kuwanu ay yihiin amarro ka soo baxay erayada culimmada, oo sida muuqata amarka Dauriyta waa haa shucuur, laakiin kan u sameeya shuqulladan jacaylka uu u qabo dadka kale ayaa sidoo kale tan ku oofinaya mitzvah Dauriyta. Laakiin ma jirto wax caqabad ah oo ku wajahan luqadda Maimonides halkan si loo fahmo in xitaa Dauriyta mitzvah oo dhab ahaantii la macaamila xiriirka si loo ammaano ay noqon karto mid maskaxeed oo aan ahayn shucuur sida aan halkan ku sharaxnay.
 Sida aan halkaas ku sharaxay, kala soocidaani waxay la xiriirtaa farqiga u dhexeeya Aristotelian ee u dhexeeya shayga iyo kiiska ama maadada iyo qaabka, iyo falsafada Kant ee farqiga u dhexeeya shayga laftiisa ( nuumana ) inuu u hadlo sida ay u muuqato indhaheenna ( ifafaale).
 Halkan ka fiirso tusaalooyinka aan ka soo qaatay sheekadii xariifnimada ahayd ee qoraagii Argentine Borges, "Ochber, Telen, Artius", ee dunes uu turjumay Yoram Bronowski.
 Waxaan halkaas ku muujiyay in caddayn loo keeni karo arrintan doodda ontological ee jiritaanka Ilaah. Haddii jiritaanka shaygu yahay sifadiisa, sababtoo ah markaa jiritaanka Ilaah waxaa lagu caddayn karaa fikradiisa, taas oo aan macquul ahayn. Inkasta oo aad aragto dood faahfaahsan oo ku saabsan dooddan buug-yaraha ugu horreeya ee goobta. Halkaa waxa aan isku dayay in aan tuso in dooddu aanay sal lahayn (xitaa haddii aan loo baahnayn).
Milicsi ka dib tegitaankii R. Binyamin David Levy (Tiirka 124)
Darush, Basbaaska, Jacaylka Israa'iil iyo Wanaaggeeda (Tiirka 52)
Heesaha Dhulka Aan Jeclahay: Muuqaal Qurux Badan Casharka Dalka Hooyo (Tiirka 153)
16 Fikradaha ku saabsan "Jacaylka: Inta u dhaxaysa dareenka iyo maskaxda (Tiirka 22)"
30 Tishrei 10 - 2016/12/11 saacada XNUMX:XNUMX
Waa maxay macnaha 'jacaylka caqliga', mar haddii jacaylku yahay dareen?
Mise tani waa khalad oo dhab ahaantii waxay ka dhigan tahay tixraac iyo isku xirnaanta mid kale - iyo 'maskaxda' ujeeddadu maaha in la fahmo falanqaynta laakiin dareenka ayaa ah waxa saxda ah ee la sameeyo?
Maahmaahda xagga jacaylka, waxa laga yaabaa in aanay macnaheedu ahayn in jacaylku yahay mid shucuur leh, laakiin nuxurka masaalku waa xaqiiqada ah in qofku aanu ‘khafi karin’ had iyo jeer.. Waxaa laga yaabaa inay tahay xaqiiqda ah in dareenkani 'ku guuleysto' qofka oo dhan Miyay iftiimaysaa...
Murankaygu waa maya. Dareenka ayaa ugu badnaan calaamad u ah jacaylka ee ma aha jacaylka laftiisa. Jacaylka laftiisu waa go'aan go'aan qaadasho ah, marka laga reebo haddii dareenku soo baxo markaa malaha aniga ayaa go'aansaday.
Ma arko waxa ay ka dhigan tahay gorfaynta. Tani waa go'aanka in tani ay tahay waxa saxda ah in la sameeyo, sida Maimonides ku qoray aayadda labaad.
Haddi masaalku u iman waayo si uu waajibkayga u caddeeyo, maxaa dan ah? Wuxuu ii sheegaa maxaa igu dhici doona nafsaddiisa? Waxay u badan tahay inuu u yimid si uu u qeexo waxa ay tahay waajibkayga in aan sameeyo.
30 Tishrei 10 - 2016/12/13 saacada XNUMX:XNUMX
Sida muuqata waxaa jira farqi u dhexeeya 'shaqada ka timid jacaylka' kaas oo rabigu wax ka qabtay boostada, iyo 'mitzvot ahavat ha' (kaas oo Maimonides uu ka hadlayo sharciyada Yishuv).
Gudaha Halachot Teshuvah Maimonides wuxuu la macaamilayaa waxa Eden u keenaya inay caabudaan magaca - iyo runtii ereyada rabbaanku waa kuwo lagu qanci karo…
Laakiin marka loo eego noqoshada mitzvah, mitzvah jacaylka Gd kama macaamilo waxa qofka u keenaya inuu shaqeeyo, laakiin isaga ayaa ku waajib ah inuu horumariyo (sida ereyada Hagli Tal - farxad oo horumarisa kala badh waajibaadka)… U fiirsashada abuurista
Gebi ahaanba waa ku raacsan yihiin Tani dhab ahaantii waa xiriirka ka dhexeeya sharciyada aasaasiga ah ee Tawreed iyo Teshuvah. Haddana H. Teshuvah wuxuu ku tilmaamay jacaylka runta samaynta sababtoo ah waa run. Maxaa ka dhexeeya taas iyo dareenka? Waxay u badan tahay in jacaylka ay labada goobood isku hayaan uu yahay isku jacayl. Tawreedka hoose waxa uu qoray in jacaylka lagu gaadho in la fiirsado uunka (tani waa tilmaantii aan ka hadlayay), Teshuvah waxa uu ku sheegay in macnaheeda uu ku saabsan yahay ka shaqaynta jacaylka uu yahay samaynta runta sababtoo ah waa run. Oo iyagu waa erayadayda.
Fikradda cabsidu dhab ahaantii way ka duwan tahay inta u dhaxaysa Yeshiva iyo Halachot Teshuvah
Tani waa caqli-gal aad u yaab leh. Marka laga hadlayo ka shaqaynta lacag samaynta oo laga hadlayo in wax lagu iibsado lacag, ereyga "lacag" wuxuu u muuqdaa macnayaal kala duwan? Haddaba waa maxay sababta marka aad dareento jacayl ama marka aad samayso wax jacayl ah, ereyga "jacayl" uu u soo baxo laba macne oo kala duwan?
Dhanka cabsida, waa in sidoo kale laga wada hadlaa xiriirka ka dhexeeya cabsida sarraysiinta iyo cabsida ciqaabta. Haddii fikrad la mid ah la isticmaalo waa inay lahaataa macno isku mid ah, ama in ka yar oo leh xiriir ku filan oo u dhexeeya macnaha. Labada xaaladoodba cabsidu waa isku mid, kala duwanaanshuhuna waa su'aasha ah maxaa keenaya cabsida, ciqaabta ama sarraysiinta.
Fasiraadda Halacha C waxay iila muuqataa mid cidhiidhi ah.
Way adag tahay in cabbirka khibradda laga saaro ereyada Maimonides oo la yidhaahdo kaliya wuxuu ka digayaa "tirtida Tawreed." Waxa hubaal ah in ay u muuqato in lagu tilmaamo waayo-aragnimada qoto dheer ee Ilaah-jecel in waxa keliya ee adduunka ka jira ee isaga khuseeya ay tahay jacaylka Ilaah. Anigu haba yaraatee kuma raacsani malo-awaalka maqaalka in waayo-aragnimada shucuurtu ay dhexda u geliso qofka wax jecel oo kalgacaylka kaliya uu gacalka dhex dhigo. Waxay ila tahay in uu jiro heer ka sarreeya kala fogaanshiyaha qabow waana marka rabitaanka qofka wax jecel uu ku milmo rabitaanka gacaliyaha oo fulinta rabitaanka gacaliyaha ay noqoto fulinta rabitaanka jacaylka iyo caksigeeda. marka laga hadlayo " sida uu doono u samee doonistaada ". Jaceylkan, lagama yaabo in laga hadlo qof jecel ama qof la jecel yahay oo dhexda ah ee laga hadlo hal rabitaan guud oo labadaba ah. Fikradayda, Maimonides wuxuu ka hadlayaa tan marka uu ka hadlayo rabitaanka kan Ilaah jecel. Ma khilaafsana samaynta runta waayo waa run ka iman karta rabitaanka runta.
1. Aniga ilama aha mid aad u adag. Waxaan ka faallooday daaweynta saxda ah ee masalooyinka.
2. Male-awaalka maqaalku maaha in waayo-aragnimada shucuurtu ay udub dhexaad u dhigto jacaylka, laakiin badanaa waxay leedahay cabbir noocaas ah (waxay ku lug leedahay).
Arrinka ururkan suufigu aad buu iigu adag yahay oo uma malaynayo inay wax ku ool ah tahay, gaar ahaan ma aha xagga shay aan la taaban karin oo aan la taaban karin sida Eebbe oo kale, sidaan u qoray.
4. Xataa haddayna ka hor imanayn samaynta xaqa, illeen waa run, laakiin isku mid ma aha. Maimonides ayaa tan ku tilmaamay jacayl.
30 Tishrei 10 - 2016/12/14 saacada XNUMX:XNUMX
Sida caadiga ah, xiisaha iyo fekerka.
Isla mar ahaantaana, macnaha Maimonides ma aha oo kaliya 'wax yar oo murugo leh', iyo xataa ma aha degdeg weyn, waa si fudud qallooc (cafis). Maimonides wuxuu sameeyay intii karaankiisa ah si uu u qeexo xaalad shucuur ah, waxaadna ku qasabtay inuu sheego inay weli tahay wax macquul ah oo fogeynaya (sida aad u qeexday) macnaha guud, sababtoo ah halkan maaha kaliya in la iska indhatiro masaallo].
Marka la eego su'aasha guud ee nuxurka dareenka, waa in la ogaadaa in dareen kastaa uu yahay natiijada garashada maskaxda qaarkood. Mas ka cabsashadiisu waxay ka timid aqoonteenna inay khatar tahay. Ilmaha yar kama cabsan doono inuu abeesada ku ciyaaro.
Sidaa darteed waa khalad in la yidhaahdo shucuurtu waa dareen uun. Waa dareen ka shaqaysiiya natiijada aragtida qaarkeed. Haddaba qofka aan maskaxdu dhaawacmin, wax dareen ahna aan ku kicin isaga oo raacaya dhaawacii uu qof kale u geystay, waxa soo baxaysa in aragtidiisa akhlaaqeed ay liidato.
Fikradayda, tani sidoo kale waa ujeeddada Maimonides. Marka uu qofku ka warqabo xaqiiqada dhabta ah, sidaas oo kale dareenka jacayl ee qalbigiisa ayaa kor u kacaya. Waxay ila tahay inay arrimuhu ku caddaatay dambe ee cutubka (Halacha XNUMX):
Waa wax la og yahay oo cad in jacaylka Eebbe aanu ku xidhnayn qalbiga qofka – ilaa uu mar kasta si sax ah u gaadho oo uu uga tago wax kasta oo dunida yaalla iyada mooyee, siduu u amray oo yidhi ‘Qalbigaaga iyo naftaada oo dhan. '- laakiin ra'yi uu ogaa. Sida laga soo xigtay ra'yiga, waxaa jiri doona jacayl, haddii wax yar iyo haddii wax badan. "
Halkan si cad: a. Jacaylku waa dareen ku xidhan qalbiga qofka.
B. Amarka Tawreed wuxuu ku saabsan yahay dareenka.
saddexaad. Mar haddii dareenkani yahay natiijada maskaxda,
Micnaha amarka ah in la jeclaado Ilaah waa in lagu badiyo maskaxda Ilaah.
Ma aanan arkin ereyada Maimonides halkan in ay tahay dareen. Waa miyir laakiin daruuri maaha dareen. Waxaad sidoo kale iska indhatiraysaa xidhiidhka ka dhexeeya B iyo C ee aan u istaagay hadaladeyda.
Laakiin waxaas oo dhan ka sokow, wax dhib ah iguma qabo mabda'a erayadaada, waayo xitaa habkaaga weli hawsha na saaran waa hawsha garashada, in la ogaado oo la ogaado, ee maaha dareen. Dareenka haddii loo abuuray natiijada - waa la abuuri doonaa, haddii kale - markaa maya. Sidaa darteed shucuurtu waxay soo baxdaa ugu dambeyntii annaga oo aan xakameyn. Xogta iyo waxbarashadu waxay ku jiraan gacmaheena, dareenkuna waa natiijada ugu badan. Haddaba maxay ku kala duwan yihiin waxa aad soo bandhigto iyo waxa aan qoray?
CPM oo loogu talagalay qofka maskaxdiisu dhaawacday oo aan awoodin in uu jeclaado. Ma kula tahay in qofka noocaas ahi aanu xajin karin amarka jacaylka Ilaahay? Fikradayda haa.
Ugu dambeyntii, haddii aad horey u soo xigatay halakhahda laga hadlayo Rambam, maxaad u soo dhexgashay? Waa kan luqadda oo dhan:
Waxaa la og yahay oo cad in jacaylka barakeysan uusan ku xirneyn qalbiga qofka ilaa uu mar walba si sax ah u gaaro oo uu ka tago wax kasta oo adduunka ku jira marka laga reebo, sida uu u amray oo uu yidhi "Qofka barakeysan" ma jecla wax yar iyo wax badan, sidaa awgeed waa in aadmigu si wada jir ah u fahmaa oo la baro xikmadaha iyo garaadka u sheegaya in uu isagu leeyahay oo ah awooda uu aadamuhu u leeyahay in uu fahmo oo uu gaadho sida aynu ku soo aragnay sharciyada aasaasiga ah ee Tawreed.
Waxaa noo cad in tani ay tahay ra’yi ee aysan ahayn dareen. Iyo ugu badnaan shucuurtu waa maanka ka soo baxa. Waajibka jacaylka Ilaahay kuma jiro dareenka ee waa maanka. Iyo NPM oo loogu talagalay dadka maskaxda ka dhaawacan.
Sideese ku dhici la’dahay in lagu dhameeyo hadalka Rabbi ee ah in halkaas lagu gaaro:
Wax la yaqaan oo cad, iwm. AA waa doqonnimadii aan garan waynay sababta ay wax jiho u tahay, laba arrimood ayaanu u fasirnay in gabay uu nacasnimo u yahay Daa’uud, arrin kalena jacaylkeeda ayaa ku gaadhaysa arrimahaaga oo aanad bixinayn. u fiirsada iyaga
Ilaa hadda aad u wanaagsan fiidkii caawa.
1. Aragtidayda odhaahda 'qalbiga qofka ku xidhan' waxay uga habboon tahay dareenka marka loo eego miyir-qabka.
2. Xidhiidhka u dhexeeya B iyo C waa sabab iyo saamayn. Taasi waa: maskaxdu waxay horseeddaa jacayl. Jacaylku wuxuu keenaa shaqo magaciisa (ma aha jacayl ee waa 'shaqo jacayl', i..: shaqo jacayl ka soo baxa).
Seder ereyada Maimonides wuxuu la xiriiraa mawduuca - mawduuciisu maaha amarka jacaylka Ilaah (tani waa mawduuca aasaaska Tawreedka) laakiin shaqada Ilaah, iyo marka uu yimaado si uu u sharaxo shaqada ugu fiican. wuxuu sharxayaa dabeecaddiisa (magaceeda - II) iyo meesha ay ka timid ), Kadibna wuxuu sharxayaa sida loo gaaro jacaylkan (Da'at - HV).
Tan waxaa lagu sharaxay ereyada Maimonides ee dhamaadka Halacha XNUMX: Dabadeed Halacha C wuxuu ku sharaxay jacaylka saxda ah waxa uu yahay.
3. Farqiga u dhexeeya erayadeena waa mid aad u weyn. Fikradayda, ilaalinta mitzvah waxay ku jirtaa shucuur, taas oo ah: shucuurtu waa mid udub dhexaad ah oo aan ahayn wax soo saar yar oo aan loo baahnayn. Kii u fiirsada 'Platonic' iyo 'jacaylka Ilaah' ee fogaana ma dhawro mitiqaadka. Haddii uu ku dhaawacmo amygdala si fudud ayaa loo kufsadaa.
4. Maan fahmin waxa xigashada sii wadida luuqada Maimonides ku daray
(Erayada "ma jecla kan barakaysan [laakin ra'yi ahaan ...]" kama muuqdaan daabacaadda Frenkel, sidaas darteed ma aanan soo xigan, laakiin macnuhu waa isku mid. Jacaylka "sida ereyada qaababka, laakiin waa waxay ahayd oo kaliya in la caddeeyo, halkan sidoo kale macnuhu waa isku mid)
1. Wanaagsan. Runtii taas ma hubo.2. waxan oo dhan waan ku raacsanahay. Welina runta samee sababtoo ah waa run aniga ilama aha inay la xidhiidho shucuurta jacaylka ee waxay la xidhiidhaa go'aan garasho (laga yaabee in dareenka jacaylku la socdo, in kasta oo aan daruuri ahayn. eeg qoraalkii hore).
3. Markaa waxaan ku celcelinayaa sababta aan noogu midayno wax iskiis u soo baxa? Inta ugu badan mitzvah waa in la qoto-dheereeyo aqoonta iyo shaqada garaadka, iyo jacaylka si dabiici ah ka kaca ka dib ( barakeysan Mu'miniinta) waa ugu badnaan calaamad u ah in aad samaysay. Sidaas daraaddeed kii maankiisu waxyeeloobay lama kufsado, laakiin si buuxda buu u addeecaa mitzvah. Taas calaamo kuma hayno, Eebbaa og, waana kan ugu khayr badan.
4. Xigashada sii wadida luuqada Maimonides waxay ka hadlaysaa aqoonsiga u dhexeeya jacaylka iyo garashada, ama ugu badnaan jacaylku waa saameyn dhinaca ogaanshaha.
Waxay iila muuqataa inaan si waafi ah u caddaynay mawqifyadayada.
Kaliya su'aashaada soo noqnoqota: arrimuhu aad bay u fudud yihiin.
Ilaahay wuxuu ina farayaa inaynu dareenno. Haa!
Laakiin waa sidee habka loo sameeyo? In la badiyo ra'yiga.
Habka aqoonyahanka: ilaalinta mitzvah - dareenka, ficilka mitzvah - badashada ra'yiga.
(Erayada Rabbi Solovitchik ee ku saabsan qaar ka mid ah mitzvos waa caan: salaadda,
Laakiin waxaad u jawaabtaa, in dhawrista masiixyadu qalbiga ku jirto).
Haddii aad diyaar u tahay inaad aqbasho suurtogalnimadeeda fikradeed 'daryeel ku saabsan shucuurta
Anaga oo kaliya maahan ficiladayada iyo ra'yigayada, markaa arrimuhu waa kuwo la fahmi karo oo aan haba yaraatee wax lala yaabo ah.
Dabadeed shucuurtu maaha kaliya 'wax soo saarka' aan loo baahnayn, laakiin jidhka mitzvah.
(Halkanna waxaa ku ladhan erayadii caanka ahaa ee Rabco ee ku saabsanaa hamuunta.
Halkaa waxa uu isticmaalaa isla mabda'a: Haddii miyirkaagu toosan yahay,
Si kastaba ha ahaatee, dareenka hungurigu ma kici doono)
Runtii waxaad ku andacoonaysaa in qofka caqligiisa ku dhaqma oo aan ku dhaqmin caadifad uu yahay nin xor ah oo kaliya, tusaale ahaan, jacaylka Alle waa caqli-galnimo ee ma aha caadifad, laakiin waxaad mooddaa in la odhan karo si la mid ah qofka. qofka ka hor istaaga shucuurtiisa ayaa xidhan ee maaha nin xor ah sidaas darteed qofka u dhaqma sida uu qabo Maskax ku xidhan maskaxdeeda ee aan xorta ahayn, waxa kale oo aad si gaar ah jacaylka uga sheeganaysaa in jacaylka shucuureed uu yahay mid caadifad ah waayo waa caqliga. taasi waxay u soo jeesatay dhinaca kale inaadan taageerin shucuurta (naftaada) laakiin caqligani sidoo kale wuxuu ku adkaysanayaa naftaada sidee ayaad ugu kala duwan tahay madax-banaanida labada xaaladood?
Waxaan ku xasuusinayaa in mar aan wada hadalnay aad ka heshay dooda oo aad ii sheegtay in aad wax ka qorto mowduuca ah in qofka kaliya ee noloshiisa ku dhaqma sida uu qabo Halacha uu yahay qof caqli-gal ah, iyo in Talmud iyo Halacha ay ka duwan yihiin in ay qaataan fikrado aan la taaban karin. una habeeyaan si ay ugu dhaqmaan.
Waxa la odhan karaa maskaxda iyo shucuurtu waa laba hawlood oo kala duwan oo meeqaamkoodu siman yahay. Laakin go'aan maskaxeed doonista ayaa ku lug leh halka dareenku yahay dareen la igu qasbay. Waxaan tan ku kordhiyay buugaagteyda Sayniska Xoriyadda. waad ku mahadsantahay xasuusinta. Waxaa laga yaabaa in aan qoraal ku qori doono goobta.
Waxaan filayaa inay ku xiisayn doonto http://davidson.weizmann.ac.il/online/askexpert/med_and_physiol/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%A8%D7%92%D7%A9-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%92%D7%99%D7%95%D7%9F
Waxaa jira doodo kale oo badan oo noocan oo kale ah, badankooduna dhammaantood waxay la kulmaan madmadow fikradeed (ha qeexin dareenka iyo maskaxda. Si kastaba ha ahaatee, waxba kuma lahan ereyadayda sababtoo ah waxay ka hadlaysaa dhaqdhaqaaqa maskaxda waxaanan ka hadlaa fikirka. Fikirka waxaa lagu sameeyaa gudaha. Maskaxda ee ma aha Maskax.Uma fikiro sababtoo ah isagu ma go'aansado inuu sidaas sameeyo "ma tixgeliyo" Neuroscience waxay u maleyneysaa in dhaqdhaqaaqa maskaxda = fekerka, tanina waa waxa aan qoray in sidatan oo kale biyaha qulqulaya ay ku lug yeeshaan fikirka. hawlqabad.
26 Sivan 06 - 2019/20/42 saacada XNUMX:XNUMX
Qaybta xigta ee maqaalka lagu eedeeyay, T.S. Waxaan ku tilmaami doonaa xargaha labajibbaaran:
"Taasi waa, farxadda iyo raynrayntu ma dhimaan qiimaha ficilka ilaa inta ay ku xiran yihiin saameyn dhinac ah. Laakiin haddii qofku wax u barto raaxaysi iyo raynrayn, tusaale ahaan kuwani waa waxyaalaha ku dhiirigeliya waxbarashadiisa, hubaal maaha in wax loo barto. Halkan waxay ku saxnaayeen "khalad." Eray-bixinteenna waxa la yidhi khaladkoodu maaha in ay u malaynayeen in aan daraasadda lagu samayn hab dhexe [= unugga centrifugal]. Taas lidkeeda, gabi ahaanba waa sax. Qaladkoodu waa in jiritaanka raaxaysi iyo rayrayntu ay ku tusinayso fikirkooda in tani ay tahay fal centrifugal ah [= unugga centrifugal]. Runtii lagama maarmaan maaha. Mararka qaarkood raynrayn iyo raynrayntu waa shucuur ku timaada oo keliya natiijada waxbarashada oo aan sabab u noqon.
2. "Isburinta" labada sharci ee iskuxiran ee Rambam ee ku saabsan jacaylka, oo u muuqda inay si fudud u degeen sida erayada dharabka dhogorta leh ee aad adigu mar dambe keentay oo aad ku sharaxday TotoD. Tani waa sida uu Maimonides halkan uga sheegay jacaylka Ilaah. Waxay leedahay sabab maskaxeed, iyo cawaaqib shucuureed. Waxa kale oo uu sharraxaad ka bixiyey jacaylka uu kaga hadlay Shuruucda Aasaasiga ah ee Tawreed PB [oo uu sidoo kale ku sifeeyey shucuur iyo bogaadin, iyo meel aan la odhan karin haba yaraatee, balse tilmaanta jacaylku yahay si aan sharraxaaddu u dhicin. halkaas ka codso]. U fiirsashada abuurista iyo aqoonsiga xikmadda iyo fadliga Eebbe. Sababta miyir-qabka dhabta ah / maskaxda - waxay soo saartaa [sidoo kale] natiijo shucuur ah. Waana sida uu yiri halkan sidoo kale.
26 Sivan 06 - 2019/20/57 saacada XNUMX:XNUMX
1. Aad run u ah. waan hagaajiyay
2. Halkan kuma raacsani. Ma muuqato farqi sidaas u dhexeeya labada halachah sida uu qabo Mahal Teshuvah.
'Jacaylka Xorta ah' - dhinaca shayga ee maaha dhinaca cinwaanadiisa
16-ka Tammuz 07 - 2020/17/39 saacada XNUMX:XNUMX
Marka la eego farqiga halkan lagu soo jeediyay ee u dhexeeya jacaylka qaybta lafaha iyo jacaylka qaybta cinwaannada - waxaa suurtagal ah in la fahmo fikradda 'jacaylka xorta ah' ee uu abuuray Rabbi Kook.
Waxaa jirta xaalad qofka dabeecaddiisa ama hoggaankiisu ay aad uga xun yihiin oo aan la dareemi karin sifo wanaagsan oo uu leeyahay oo kicisa dareenka jacaylka dabiiciga ah ee isaga loo qabo.
Xaaladdan oo kale, waxaa jiri kara oo kaliya 'jacayl lafaha ku jira', jacaylka qofka oo keliya iyada oo loo eegayo 'jecel qofka lagu abuuray B'Tselem' ama 'ka jecel reer binu Israa'iil ee wiilasha loogu yeero meesha', Kuwaas oo xitaa waajibaadkooda hoose ee 'wiilasha musuqmaasuqa' weli loogu yeero 'wiilal', Inta badan 'naxariista aabbaha' ayaa u jira wiilashiisa.
Si kastaba ha ahaatee, waa in la ogaadaa in jacaylka aabbuhu u qabo carruurtiisa xitaa xaaladdooda ugu liidata ma aha oo kaliya 'jacayl xor ah'. Waxa kale oo lagu nafaqeeyaa rajada laga qabo in wanaagga ku qarsoon wiilasha xoog-siguna uu mira dhalo. Iimaanka adag ee aabbihiis in carruurtiisa iyo Abuuraha ee dadkiisa - laga yaabaa radiate ay saamayn wanaagsan, oo sidaas daraaddeed 'iyo soo celiyay qalbigii aabbayaasha' in wiilasheeda 'waxaa sidoo kale laga yaabaa in soo celinta qalbiga wiilasha' awowayaashood.
Waxaa mudan in halkan lagu xuso sharraxaadda dib loo cusboonaysiiyay ee uu Bat-Galim Sha'ar (hooyadii Gil-ad XNUMX) u soo jeedisay fikradda 'jacaylka xorta ah'. Sida ay sheegtay, 'jacaylka xorta ah' waa 'jacaylkooda nimcada'. Helitaanka barta togan ee dadka kale - waxay kicin kartaa jacaylka lumin iyo neefta nolosha xiriirka.
Dabcan arrimuhu waxay la xiriiraan ereyada Rabbi Nachman ee Breslav ee Tawreed Rafev ee 'Hees to Elki inta aan', marka aad ku faraxdo 'wax yar oo dheeraad ah', in yar oo wanaagsan, ama in ka badan si sax ah: in yar in Waxay u muuqataa in nin ku hadhay - iyo 'iftiin yar - waxay celisaa mugdi badan'.
Tu B'Av 23 - 07/2021/16 saacada 17:XNUMX
Raabbigu wuxuu ii caddayn doonaa waxa ay ku kala duwan yihiin jacaylka shucuurta iyo damaca ma dareemi karo.
Tu B'Av 23 - 07/2021/17 saacada 42:XNUMX
Maan fahmin su'aasha. Farqiga u dhexeeya labadan dareen kuma xidhna erayadayda. Qof kastaa wuu ku raacsan yahay in aanay isku mid ahayn. Kuwani waa laba dareen oo kala duwan. Damacadu waa rabitaan ah in aan wax la wareego, in aan anigu noqdo. Jacaylku waa dareen uu udub dhexaad u yahay kan kale ee ma aha aniga (centrifugal ee maaha centrifugal). Waxaan halkan ku kala saaray caadifad iyo garasho (jacayl maskaxeed iyo mid maskaxeed).
Tu B'Av 23 - 07/2021/16 saacada 37:XNUMX
"Laakiin haddii jacaylku yahay natiijada xukunka maskaxda oo aanu ahayn caadifad, markaa waxaa jira meel lagu amro."
Laakin wali sidee la ii farayaa in aan wax fahmo ??? Haddii aad ii sharaxdo oo aanan weli fahmin ama aan ku khilaafsanahay khaladkayga ma aha!
Waxay la mid tahay in la isku kaashado qof noolaa qarnigii 10-aad si uu u fahmo qaabka heliocentric, haddii uu fahmo caafimaadka laakiin haddii uusan fahmin waxa la sameeyo!
Ilaa aad tiraahdo Mitzvah si aad u fahanto Ilaah waxay ka dhigan tahay ugu yaraan inaad isku daydo inaad fahamto haddii aadan fahmin wax xun waa lagu kufsaday
Tu B'Av 23 - 07/2021/17 saacada 43:XNUMX
Shaqaaluhu waa inay arrinta dib u eegaan ilaa aad ka fahmayso. Malaha ayaa ah in markaad fahanto shayga aad jeclaan doonto. Hadii aad ku guulaysan waydo waa lagu kufsadaa.
Tu B'Av 23 - 07/2021/16 saacada 43:XNUMX
Iyo su'aal kale: sidee u ilaalisaa oo aad deriskaaga u jeceshahay sida naftaada haddii ay tahay jacayl maskaxeed, maxaa halkan laga fahmayaa?
Waa in la fahmo macnaha walaalkaa reer binu Israa'iil. Fahamka in dadku ay yihiin nooc qoys (qoysku waa dabiici).
Tu B'Av 23 - 07/2021/16 saacada 51:XNUMX
Ma in la sheego shaqada shayga ka hor hadal lafahiisa ku saabsan? Tusaale ahaan, in la yidhaahdo miisku waa "wax ogolanaya in wax la dul saaro" waa sifo ka mid ah mise waa lafihiisa?
Tu B'Av 23 - 07/2021/17 saacada 44:XNUMX
Waxaan filayaa in taasi ay tahay muuqaal Waxaa laga yaabaa in tani ay sidoo kale qayb ka tahay fikradda miisaska guud ahaan. Laakiin marka la eego miiska gaarka ah ee i hor yaal tani waa sifo ka mid ah.